Barcelona oo heshiis la saxiixatay ciyaaryahan ay kasoo saaratay Qeybta Dayarka Barca.
6/16/2012 6:13:00 A
| Comments() Barcelona--KNN--Sida lagu shaaciyey Webka gaarka ah ee kooxda Barcelona waxa ay sheegeen maamulka naadigaasi in ay heshiis la galeen dayar kasoo baxay qeybta ciyaaryahanada catalaniga Juniorka. Talent Artur Miani oo udhashay qaranka jaallayaasha Brazil ayaa barca waxay heshiis lix sano ah la gaareen xidiggaasi iyadoona uu kusoo biiraya heerka 1aad ee kooxda Catalaniga.
Waa mid ka mid ah laacibiinta kor loo soo qaaday markii aan aragnay xirfadiisa ciyaareed waxaa sidaa website-ka gaarka ah usheegay mas’uul katirsan kooxda Barcelona.
Catalaniga ayaa ka mid ah kooxaha Yurub ka ciyaara ee soo saarta da’yaro heerka 1aad kooxdaasi uciyaara waxaana Talent Artur Miani uu yahay mid aad usoo jiitay qaab ciyaareedkiisa taageerayaasha dhan.
Sikastaba ha’ahaatee Fabregas ayaa hore uga mid ahaa laacibiinta laga soo saaray tababarida kooxda heerka da’yarka Barcelona waxana laga dhursugayaa waxa uu Barcelona kusoo kordhiyo Talent Artur Miani.